Suufigii tuulada W/Q:- Caliqeyr M. Nuur | Laashin iyo Hal-abuur
Suufigii tuulada W/Q:- Caliqeyr M. Nuur
Nin baa beri wuxuu maqlay suufi tuulo agtiisa ah deggan oo riyooyinka fasira. Sheeka been ah ayuu samaystay, wuxuuna ula tegay suufigii. Wuxuu ku yiri: “Sheekhow, xalay ayaan ku riyooday wan weyn oo ii bishaareynaya. Wax san ayuu iigu bishaareynayey, balse, ma xusuusto wixii uu ii sheegayey. Bal ii fasir”. Sheekadan beenta ah wuxuu ninku ku tijaabinayey arrinka suufiga. Balse, suufigii ayaa yiri “Riyadaadu waxay sheegaysaa in aad heli doonto dhar badan oo cusub”. Ninkii isaga oo hoosta ka qoslaya ayuu aqalkiisii aaday. Markuu aqalkii gaaray ayaa waxaa u yimid nin ay is yaqaanneen oo boorsa dhar ah u sida. Wuxuu u sheegay in uu dharkaan u soo iibiyey walaalkiis, balse, markuu tuulada yimid uu ogaaday in uu walaalkiis dhintay beryo ka hor.
Ninkii sidaas ayuu ku helay dhar saddaqa ah. Isaga oo yaabban ayuu mar labaad u tegay suufigii. Wuxuu ku yiri “Sheekhow xalay waxaan ku riyooday isla wankii oo ii bishaareynaya, balse, ma xusuusto wixii uu ii sheegayey”. Suufigii ayaa yiri: “Riyadani waxay kuu sheegaysaa in si fiican laguu soori doono”. Ninkii isaga oo shaki iyo hubaal u dhexeeya ayuu yimid aqalkiisii. Markii uu soo fadhiistayba reer deriskiisa ah ayaa u keenay xeeryo hilib iyo raashin ka buuxaan. Waxay u sheegeen in galabta reerku lahaa duco oo ay sidaas isagana wax ugu reebeen maadaama uu maqnaa. Waa uu dhergay.
Ninkii mar saddexaad ayuu suufigii ku laabtay. Jid fiican oo la hubo ayaa u furmay. Wuxuu ku yiri: “Sheekhow xalayna waxaan ku riyooday isla wankii oo ii bishaareynaya”. Suufigii wuxuu yiri “Markaan waa lagu garaacayaa”. Ninkii dib ayuu u noqday isaga oo welwelsan. Markuu tuulada galay ayuu la kulmay odaygii deriskiisa ahaa oo si daran xaaskiisa u garaacaya. Wuxuu isku deyey in uu odayga qabto waase kari waayey, markaas ayuu naagtii isku duubay si uu usha uga xigsado. Odaygii oo arrinkaas ka sii xanaaqay ayaa ninkii si xun u garaacay ilaa heer la mooday in uu dhintay.
Beryo kaddib ayuu ninkii u tegay suufigii. Isaga oo runta u sheegaya ayuu ku yiri: “Sheekhow saddexdii riyo ee isku midka ahaa waxay wada ahaayeen been, haddana sidii aad iigu fasirtay ayey u dhaceen. Bal arrintaasna ii fasir”. Suufigii wuxuu yiri “Horta wanka aad ku riyootay wuxuu ahaa adiga. Markii koowaad wanku waa baahnaa waana la dheefiyey. Markii labaadna wanku waa arradnaa, waana la arrad-tiray. Markii saddexaadna wanku waa uu kibray oo wax-badsi ayuu doonay, waana la edbiyey oo la garaacay”.